SPY384 - OMG Bluetooth Speaker Kamera miafina miafina - Vahaolana OMG
nirohotra - Mampandeha horonantsary 1080P HD miaraka amina masolavitra zoro fahitana 140 degre hahazoana sary miafina avy amin'ny smartphone na tablette amin'ny alàlan'ny fampiharana maimaimpoana.
DINGANA MOTION - Mampihetsi-po ny fampandrenesana amin'ny fotoana tena izy ireo sensor sensor, ary ny firaketana karatra SD mihetsika dia mandefa fampandrenesana amin'ny alàlan'ny lahatsoratra na mailaka. Ny fakantsary mamantatra ny fihetsiketsehana dia mitifitra mahitsy hatramin'ny 4 metatra.
CAMERA miafina - Fakan-tsary miafina fakan-tsary miafina miafina fakan-tsarimihetsika fakana sary miafina mifangaro miaraka amin'ny tontolon'ny tranonao na ny toeram-piasanao.
SISTEMA MIASA - mpampifandray USB Micro ho an'ny famahanana sy ny fampifanarahana amin'ny finday avo lenta.
fitehirizana - Karatra Micro SD, Karatra fahatsiarovana.
Momba ny OMG Bluetooth Speaker Hidden Spy Spy Camera:
Ity mpandahateny bluetooth ity dia miasa toy ny mpandahateny Bluetooth mahazatra ihany nefa miaraka amina fiovana fanampiny. Ity mpandahateny Bluetooth ity dia manana fakantsary mpitsikilo natsangana izay miafina tsara ao anatin'ny mpandahateny bluetooth, ny fakantsary mpitsikilo dia manana fahaiza-manao WiFi izay mamela anao handefa horonantsary mivantana ny ankamaroan'ny fitaovana marani-tsaina. Mba hanaovana izany dia ampidino fotsiny ny fampiharana maimaim-poana amin'ny telefaoninao ary ampifandraiso amin'ny fakantsary WiFi ny fakantsary, ary ianao vonona ny handefa horonantsary horonantsary HD 1080p feno amin'ny fitaovana findainao. Ambonin'izany, ity mpandahateny Bluetooth ity dia manana sensor mihetsika ao anatiny izay handefa fampandrenesana eo noho eo ho an'ny mailakao. Izy io aza dia manohana karatra SD hatramin'ny 128GB ny habeny. Fanampin'izay, rehefa misy ny fanetsehana ny fandraisam-peo mihetsika dia hahazo mailaka sy lahatsoratra manaitra anao amin'ny hetsika ianao. Ny fiasan'ny DVR dia manana endri-tsoratra tafahoatra izay manindry azy avy hatrany ireo rakitra tranainy indrindra amin'ireo vaovao rehefa feno ny karatra SD. Ity fakantsary miafina OMG Bluetooth Hidden Spy ity no safidy mety indrindra aminao raha mitady fakantsary mpitsikilo izay mifangaro tsara amin'ny manodidina ny tranonao ianao ary izay tsy dia mandeha amin'ny toerana mety.
Jereo ny refy famahana: 1080P / 720P
Angola hita: 140
Famantarana ny fihetsiketsehana: tsipika mahitsy amin'ny fakantsary 4 metatra
Fanazavana kely: 1LUX
Halavan'ny fahitana amin'ny alina: 8Meter
Format voafehy: H.264
Sakany firaketana: 5M2
Temperature fitehirizana: -20-80 degre centigrade
Temperature miasa: centreade -10-60 degre
Fahalemen'ny asa: 15-85% RH
Kara-pahatsiarovana: karatra TF
Fahaizana farafahakeliny karatra fahatsiarovana: 128GB
Rindrambaiko mpilalao: VLCPlayer / SMPlayer
Rafitra miasa amin'ny solosaina: Windows / Mac OS X
Rafitra miasa finday: Android / iOS
Web browser: IE7 sy ambony, chrome, firefox safari.etc